Dilkii Usama Bin Laden oo noqday hadalhaynta ugu badan magaalada Muqdisho
Home » Unlabelled » Dilkii Usama Bin Laden oo noqday hadalhaynta ugu badan magaalada Muqdisho
Labadii maalmood ee u dambeeyay ayaa waxaa ku batay magaalada Muqdisho hadal-haynta dilka hogaamiyihii ururka Al-Qacida Usama Bin Laden oo dhawaan ay ciidamo Mareykan ah ku dileen guri ku yaal magaalada Abbottabad ee dalka Pakistan.
Dadka reer Muqdisho ayaa siyaabo kala duwan u arka dilka hogaamiyahan, waxaana goobaha lagu qaxweeyo, biibitooyinka, goobaha ganacsiga, suuqyada iyo dhamaan meelaha ay dadku ku kulmaan hadal-haynta ugu badan noqotay qaabka iyo sida loo ilay Bin Laden.
Sidoo kale joornaalada Muqdisho ka soo baxaa ayaa iyana dhinacyadooda qoraaladooda ugu badan ahaayeen dilka Usama Bin Laden, iyagoona siyaabo kala duwan u sharxaya, sida loo dilay iyo qaabka looga war helay goobta uu ku noolaa.
Dhanka kale dadka qaar ayaa aaminsan in Usama Bin Laden barnaaminjkiisii ahaa mid Soomaaliya saameeyay, waxaana ay rumeysan yihiin in dhimashadiisa wax ka badaleyso marxaladda dalka Soomaaliya.
Koonfurta Soomaaliya ayaa waxaa ku dhaqan koox la baxday Al-Shabaab kuwaas oo aaminsan mabaadii`da Usama Bin Laden, waxaana ay dhowr jeer cadeeyeen in ay ku mowqif yihiin isaga islamarkaana ay taageersan yihiin.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhankeeda soo dhaweysay dilka Usama, waxaana ay sheegtay in ay xoojisay amaanka goobaha ay gacanta ku hayso kadib dilka hogaamiyan.